गुणकारी मेथी | चितवन पोष्ट
-डा. सावित्री शर्मा
मेथीको दानामा अधिक मात्रामा पौष्टिक त¤वहरु पाइन्छन् । यसलाई राति भिजाएर बिहान खाली पेटमा मज्जाले चपाएर खाँदा र यसको पानी पिउँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्यामा फाइदा पु¥याउने गर्दछ ।
मेथीमा पाइने पौष्टिक त¤वहरु :
मेथीको दानामा आइरन, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम, सोडियम, जिंक, फस्फोरस, फोलिक एसिडजस्ता खनिज त¤वका साथै भिटामिन ए, बी र सी पनि पाइन्छ । यसका साथै यसमा भरपूर मात्रामा फाइबर्स, प्रोटिन, स्टार्च, सुगर, फस्फोरस एसिडजस्ता पौष्टिक त¤वहरु पाइन्छन् ।
मेथी दानाका फाइदाहरु :
भारतको उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको स्वास्थ्य वृत्त समाजका विभाग प्रमुख डा. अवधेश मिश्राका अनुसार मेथीले भोक बढाउँछ र यसको नियमित सेवनले पित्त, कफ र ज्वरोको समस्याबाट छुटकारा मिल्नुका साथै निम्नानुसारका फाइदा प्रदान गर्दछ ः
कमजोरीबाट मुक्ति :
मेथीको दानाको दैनिक प्रयोग गर्दा बाँझोपनजस्ता समस्या हुँदैन । वीर्यमा शुक्राणु (स्पर्म काउन्ट)को संख्यामा वृद्धि र गुणस्तर (क्वालिटी) निकै राम्रो हुन्छ ।
स्वस्थ मिर्गौला :
मेथीको दानामा शरीरमा रहेको टक्सिन बाहिर निकाल्ने क्षमता हुन्छ, जसले मिर्गौलालाई स्वस्थ राख्न सहयोग पु¥याउँछ ।
ग्याष्ट्रिकको समस्या :
मेथीको दाना नियमितरुपमा सेवन गर्दा ग्याष्ट्रिकबाट बच्न सकिन्छ । यसले जलन र एसिडिटी हुनबाट समेत बचाउँछ ।
सुगर (मधुमेह) नियन्त्रणमा रहन्छ :
मेथीको दानामा पाइने सोलुबल फाइबर्सले ब्लड सुगरलाई नियन्त्रणमा राखेर मधुमेहको खतरा घटाउने गर्दछ ।
हृदयाघातबाट बचावट :
मेथीको दानामा पाइने गेलाक्टोभेनन र पोटासियमले रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्छ र हृदयघातबाट बचाउन सहयोग पु¥याउँछ ।
पाचन प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ :
भिजाएको मेथीको दानाले पाचन प्रक्रियालाई बलियो र सशक्त बनाउँछ । कब्जियतका साथै पेटसँग सम्बन्धित अन्य समस्याबाट समेत बचाउँछ ।
स्वस्थ छाला :
मेथीको दानाले शरीरको टक्सिन बाहिर निकालेर छालालाई स्वस्थ बनाउँछ । साथै, यसको प्रयोगले चायाँ, पोतो, डण्डीफोरबाट समेत बचाउने गर्दछ ।
कालो, बाक्लो कपाल :
दैनिकरुपमा बिहान भिजाएको मेथीको दाना र भिजाएको पानी सेवन गर्नाले कपाल चाँडै सेतो हुन दिँदैन भने कपाल झर्नबाट समेत बचाउँछ ।
मेथीको दानाको प्रयोगले पाचन क्रियालाई बलियो बनाएर कब्जियत र एसिडिटीलाई घटाउने हुनाले यसले पायल्सको समस्याबाट पनि राहत प्रदान गर्दछ ।
पिसाबको समस्यामा राहत :
मेथीको दानाले धेरैपटक पिसाब लाग्न वा पिसाबसम्बन्धी संक्रमणबाट टाढा राख्न सहयोग गर्दछ । मेथीको दानाका साथै यसको हरियो साग खानाले पाचनतन्त्रले सुचारूरुपमा काम गर्दछ । ग्यास, कब्जियतलगायतका समस्याबाट मुक्ति दिलाउनुका साथै जोर्नीको दुःखाइसमेत कम हुन्छ । मेथीको साग तथा दानालाई तारेर खानुपर्दछ । पेटमा जुका वा कीरा परेमा यसको सेवन (प्रयोग) प्रभावकारी मानिन्छ । प्रत्येक दिन यसलाई कुनै न कुनै विधिबाट सेवन गर्नाले शरीरमा चिसो लाग्नबाट बचाउँछ । अनुहारमा मेथीलाई पिसेर लगाउनाले अनुहार (चेहरा) चमकदार र कसिलो हुन्छ । निरन्तररुपमा मेथीको प्रयोगले शरीरमा रहेको बोसो (चिल्लो पदार्थ) क्रमिकरुपमा कम हुँदै जान्छ र शारीरिक वजन (तौल) नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ । यसैले, गुणकारी मेथीको प्रयोग गरौँ र स्वस्थ बनौँ ।
(लेखक होमियोप्याथिक चिकित्सक हुन् ।)